पर्यटन मन्त्रीका रूपमा योगेश भट्टराईको पहिलो वर्ष « Rara Pati
पर्यटन मन्त्रीका रूपमा योगेश भट्टराईको पहिलो वर्ष
१० भाद्र, काठमाडौं । नेपाल सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भएका कामको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । पौषदेखि अषाढ महिनासम्म सवैभन्दा पूँजिगत खर्च बढि हुने समयमा कोरोनाका कारण प्रतिकुल भएकाले उत्साहजनक प्रतिफल हाँसिल गर्न नसकिएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक पर्यटन मन्त्रालयको पूँजीगत खर्चतर्फ ६४ प्रतिशत, वित्तिय खर्चतर्फ ५४ प्रतिशत र चालु खर्चमा ८० प्रतिशत गरी समग्रमा ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३८.६० प्रतिशत खर्च भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । आमजनले धेरै आशा गरिएका मन्त्री भट्टराईले कोरोना महामारी नभएको भए यस आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत खर्च हुने आँकलन गरिएको बताए ।
गौतम वुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति ४९ प्रतिशत रहेको छ । कोभिड नभएको भए भैरवा विमानस्थलको सम्पूर्ण रूपमा सम्पन्न भई सञ्चालन भइसकेको हुन्थ्यो । जसमा झण्डै साढे ३ अरव रूपैयाँ खर्च हुन सकेन । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको भौतिक प्रगति ६१ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति ९६ प्रतिशत रहेको, प्राविधिक कार्यहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यस्तै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढको हालसम्मको प्रगति १० प्रतिशत रहेको छ । निजगढमा डेढ अरव जति रकम विनियोजन गरिएकोमा विभिन्न अवरोधहरू वन मन्त्रालयसँग समयमा समन्वय नहुँदा रुखहरू गणना गर्न सकिएन । अहिले निजगढ विमान स्थलको ६० हजार रुखहरूको गणना भइसकेको छ र अरु बाँकी गणना बाँकी छ ।
त्रिभूवन विमान स्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नती गर्ने क्रममा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६१ प्रतिशत प्रगति भएकोमा अहिले ९८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । जस अन्तर्गत रन वे, ट्याक्सी वे शत प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको र धावनमार्गको दक्षिणतर्फ ३०० मिटर विस्तार गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल विस्तार कार्य ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
कोविड–१९ का कारण ५२ हजार विदेशी नागरिक र आफ्ना नागरिकलाई उद्दार गर्ने कार्य नेपाल वायु सेवा निगम र अन्य वायु सेवा निगमबाट भएको छ । अवदेखि चाटर्ड उडान कम गरी नियमित उडान सुचारू गर्ने सोंच राखिएको छ । आन्तरिक उडानतर्फ पनि केहि पहाडि हिमाली जिल्लाहरूमा नियमित उडान गर्न सकिन्छ कि भनी छलफल भइरहेको कुरा मन्त्री भट्टराईले बताए ।
हाल नेपालमा वर्षभरी सञ्चालन योग्य विमानस्थलको सङ्ख्या ३५ पुगेको, रात्रिकालिन विमानस्थलको सङ्ख्या ८ पुगेको र अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवा उडान सङ्ख्या ३० पुगेको छ । मन्त्रालयले ४० वटा मुलुकसँग हवाइ उडान सम्झौंता गरी कार्य अगाडि बढाएको छ । जापानको नारितामा गरिएको उडान राम्रो सफलता पाएको छ ।
नेपाल वायु सेवा निगमको अहिलेसम्मको अवस्था लेखाजोखा गरिएको थिएन । अहिले वायु सेवा निगमको टिडिए गर्ने काम सम्पन्न गरिएको छ । जसअनुसार निगमको कुल ५४ अरव १७ करोड सम्पत्ति रहेकोमा ४५ अरव ९४ करोड ऋण देखिएको छ ।
संस्कृति संरक्षण र विकासतर्फ
संस्कृति प्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत् देशैभरी विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदाहरूको प्रवद्र्धन कार्य सम्पन्न भएको छ । पुरातत्व विभाग अन्तर्गत पुरातात्विक स्थल संरक्षण आयोजनामार्फत् ७ वटै प्रदेशमा सम्पदा संरक्षणका कार्यहरू भएका छन् । विश्व सम्पदा स्थलको संरक्षण आयोजनामार्फत् विश्व सम्पदा स्थलको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने साथै मुस्ताङ, तिलौंराकोट आदि स्थलमा पुरातात्विक अध्ययन गर्ने कार्यहरू भएका छन् ।
भुकम्पपछि पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका ६४ वटा सम्पदाहरूको पुनर्निमाण भई हाल सम्पदा निर्माणको सङ्ख्या ४५३ पुगेको छ । पुनर्निमाण प्राधिकरणले नेतृत्वमा पुरातात्विक विभागले ३ अरव ४८ करोडको बेजेटमा २२ तले धरहरा बनाउनु पर्नेमा १३ तला बनिसकेको छ । २७ करोड बजेटमा निर्माणधिन रानी पोखरीको अधिकाँश काम सम्पन्न भइसको छ ।
त्यस्तै होटलहरूतर्फ पर्यटक स्तरीय होटलहरूका सङ्ख्या १२८९ पुगेको, तारे होटलको सङ्ख्या १३८ पुगेको र अन्य होटलको सङ्ख्या ११५१ पुगेको छ ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयबाट ५० हजार इमेजहरू डिजिडलाइज गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ । पौराणिक ११ हजार पुराना ग्रन्थहरूको भौतिक तथा रसायनिक संरक्षण गर्नुका साथै ८ लाख इमेजहरू ट्याग इन गरी सरवरमा राख्ने काम भएको छ । त्यस्तै १ लाख रासीको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार र ५० हजार रासीको प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार विभिन्न ४५ जना प्रतिभाहरूलाई समर्पण गरिसकिएको छ ।
पशुपती क्षेत्र विकास कोषको समष्टिगत भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत रहेको, गौशाला भुमेश्वरी दर्शनमार्गको स्तरोन्नती गर्ने, कैलाश उमाकुण्ड घेराउ तथा हरियाली गर्ने, मृगस्थलीमा पहिरो नियन्त्रण तथा सम्पदा पुनर्निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ । पशुपती क्षेत्र विकास कोषको गुरु योजना छलफलमा रहेको छ ।
लुम्वीनी विकास कोषको समष्टिगत भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत भूमिगत रूपमा अप्टिकल फाइवर विछ्याउने र सिसिटिभि जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । वृहत्तर लम्बीनी विकास गुरूयोजना पत्र तयार भएको छ । लम्वीनीमा ५ हजार जना मानिस अट्ने हल सम्पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट नेपाली वृहत् शब्दकोषको एण्डरोयड मोवाइल एप निर्माण गरी सार्वजनिक गरिएको छ । ६० हजार नेपाली भाषाको शब्दहरू समेटिएको उक्त शब्दकोष विश्वको जुनसुकै कुनाबाट मोवाइलका माध्यमबाट निःशुल्क डाउनलोड गर्न सकिनेछ । ऐतिहासिक महत्वका ४० वटा पुस्तकहरू प्रकाशन भएका र केहि प्रकाशनको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । नेपाल ललितकला प्रतिष्ठानबाट चित्रकला प्रदर्शनी गर्ने, सिल्पकला यात्रा, थाङ्का पौवा चित्रकला कार्यशाला, राष्ट्रिय फोटोग्राफी प्रतियोगिताजस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरिएको छ ।
हालसम्म ग्रेट हिमालयन ट्रेल निर्माण कार्य ३३२ कि.मि. पुगेको छ । देशका १०० वटा घोषित नयाँ गन्तव्यहरूमध्ये ७० वटा नयाँ गन्तव्यको प्रोफाइल तयार भएको छ । स्थापित तथा विभिन्न १९२ गन्तव्य स्थलमध्ये १२२ वटाको शत प्रतिशत र ७० वटाको ८५ प्रतिशत वजेट स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट निकासा भई निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नेपालको हिमालय क्षेत्र समेट्ने ग्रेट हिमालयन टे«लको थप ७७ कि.मि. निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थप १२७ किमि. को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । हालसम्म ग्रेट हिमालयन ट्रेल निर्माण कार्य ३३२ कि.मि. पुगेको छ । देशका १०० वटा घोषित नयाँ गन्तव्यहरूमध्ये ७० वटा नयाँ गन्तव्यको प्रोफाइल तयार भएको छ । स्थापित तथा विभिन्न १९२ गन्तव्य स्थलमध्ये १२२ वटाको शत प्रतिशत र ७० वटाको ८५ प्रतिशत वजेट स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट निकासा भई निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । देशका ७ वटै प्रदेशमा १–१ वटा नमुना पर्यटकिय गन्तव्य निर्माणतर्फ सन्दकपुर, धनुषाधाम, इन्द्रसरोवर, पञ्चासी, रारा, निक्लिहवा, भादगाउँ पूर्वाधारको निर्माण औषत भौतिक प्रगति करिव ८५ प्रतिशत पुगेको छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को भव्यताका साथ सुरुवात गरी विदेश स्थित कुटनीतिक नियोग तथा व्यापारिक मेलाहरू मार्फत् व्यापक प्रचार प्रसार भएको थियो तर विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण भ्रमण वर्ष स्थगित गरियो ।
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानबाट स्नातक तथा स्नातकोत्तर गरी ३१३ जनशक्ति उत्पादन भएको १५२३ जनाको अध्यापन कार्य यथावत रहेको र ३१०९ जनालाई सिपमुलक तालिम प्रदान गरिएको छ ।
त्रिभूवन विश्वविद्यालयको सम्वन्धनमा नेपाल पर्यतिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट मास्टर्स अफ एड्भेन्चर्स स्टडिज पठनपाठन सुरुवात गरिएको छ । प्रतिष्ठानबाट कुल ११७५ जनालाई विभिन्न तालिमहरू प्रदान गरिएको छ ।